Xiaomi Mi MIX 4: E gosipụtara atụmatụ ya na patent | Gam akporosis
Ihe omuma a gosiputara atumatu nke Xiaomi Mi MIX 4, ya na ihe ijuanya na igwefoto
Jiri nwayọ onye na-emepụta Asia na-agbasawanye na Europe. Xiaomi jisiri ike nweta ọnọdụ na mpaghara telephony site na ịwepụta azịza zuru oke n'ezie na ọnụahịa knockdown. Anyị nwere ihe atụ doro anya na ezinụlọ Mi MIX, ngwaọrụ nwere ọmarịcha mma na ọnụahịa na-ada ụda. Na-achọ na ndị ọhụrụ patent, nke nwere ike na-egosi imewe nke Xiaomi Mi Mix 4, o doro anya na onye nrụpụta chọrọ inye ezinụlọ ya ihe atụ kachasị ọhụrụ na ikikere nke Mi 9.
Otu n'ime ihe ndị kasị njirimara Xiaomi Mi MIX 3 ọ bụ igwefoto ya na usoro ntanetị iji nye ihe nlele niile, na-enweghị akara ngosi ọhụụ, na-eme ka ngwaọrụ ahụ dị iche na ndị ya na ya. Na, site na ihe anyị nweworo ike ịhụ na patenti ọhụụ ọhụrụ, Mi MIX 4 ga-agbaso nzọụkwụ nke onye bu ya ụzọ.
Ikike nchọpụta a gosipụtara atụmatụ nke Xiaomi Mi MIX 4 ya na igwefoto na-agbagharị
Dịka ị pụrụ ịhụ n ’onyogho nke na - achị usoro ndị a, anyị ga - ahụ na atụmatụ nke Miia MIX 4 nke Xiaomi nwere nnukwu ihe yiri ihe atụ gara aga. Karịsịa n'ihi n'eziokwu na ọ nwere otu usoro ntanetị iji jiri igwefoto ya n'ihu. Lezienụ anya, na dị ka TigerMobiles si kwuo, isi iyi nke nchapu mmiri a, a ga-enwe nsụgharị na ihuenyo mpịachi na nke ahụ ga-apụta maka ịnweta igwefoto megapixel 60 iji nye ngalaba foto na-enweghị atụ.
N'ụzọ doro anya, anyị na-eche asịrị, yabụ na anyị enweghị ike ikwenye na nke a ga-abụ nkọwa doro anya nke Xiaomi Mi MIX 4. Ee, ọ bụ eziokwu na ọ na-adị oke mma ma ọ bụrụ na anyị atụnyere ya na onye ikpeazụ so n'ezinụlọ MIX, na eziokwu nke ịghara itinye ọkwa iji nye ngwụcha ihuenyo niile ga-abụ ihe ezi uche dị na ya site n'aka onye nrụpụta China. , ma ọ ga-adị mkpa ichere maka ngosipụta nke gọọmentị ya iji hụ ihe ụlọ ọrụ Beijing siri iju anyị anya tupu anyị atụba mgbịrịgba na ada.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi » Ihe omuma a gosiputara atumatu nke Xiaomi Mi MIX 4, ya na ihe ijuanya na igwefoto